डेंगु नियन्त्रण सरकारको काबुबाहिर, ४० दिनमा थपिए १५०० संक्रमित, मन्त्रालय भन्छ– उपचार गर्न सक्छौँ, तर नियन्त्रण हाम्रो काबुमा रहेन – Health Post Nepal
२०७६ भदौ १२ गते १९:१९
सरकारले साढे ३ महिनादेखि फैलिएको डेंगुको संक्रमण काबुबाहिर गएको जनाएको छ । डेंगु नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकारका सबैखाले प्रयास प्रभावहीन बनेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अब सरकारबाट मात्र डेंगुको नियन्त्रण सम्भव नभएको जनाउ दिएको हो ।
डेंगु नियन्त्रणका लागि महिनौँदेखि चालिएका सबै सरकारी प्रयास प्रभावहीन सिद्ध भएपछि र विज्ञहरूले नयाँ नियन्त्रणका कार्यक्रम दिन नसकेपछि बिहीबार मन्त्रालयले सीमित पत्रकारको उपस्थितिमा अन्तरमन्त्रालय छलफल तथा सरोकारवालाको बैठक आयोजना गरी डेंगु नियन्त्रण सरकारको एकल प्रयासले सम्भव नभएको जनायो । सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्दा पनि डेंगुको फैलावट नरोकिएकाले अब जनताको तहबाट मात्र डेंगु नियन्त्रण सम्भव रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । अब जन–जनले स्वयम् लामखुट्टेबाट बच्ने उपायको अवलम्बन गरेर मात्र डेंगु नियन्त्रण सम्भव भएको जनाउँदै मन्त्रालयले डेंगु नियन्त्रणका लागि आमजनतासँग अपिल गरेको छ ।
पछिल्लो समय देशका ६ वटा प्रदेशमा डेंगुको संक्रमण फैलिनेक्रम जारी छ । कर्णाली प्रदेशबाहेक मलुकका आधिकांश जिल्लामा फैलिएको डेंगुका कारण यस आर्थिक वर्षमा ३ जनाले मृत्युवरण गरिसकेका छन् भने झन्डै साढे ३ महिनादेखि चलाइएको नियन्त्रण अभियान निष्फलसिद्ध भएको छ । गर्मी सुरु भएसँगै वैशाख अन्तिम साताबाट सुरु भएको डेंगुको संक्रमण नियन्त्रणका अनेकन प्रयासका बाबजुद पनि झन्–झन् फैलावटमा तीव्रता दिँदै छ । संक्रमणको साढे ३ महिना पुग्नै लाग्दा हालसम्म ५ हजारभन्दा बढी संक्रमणको सिकार बनेका छन् । पछिल्ला ४० दिनमा मात्र १ हजार ५ सयभन्दा बढी संक्रमित थपिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोगनियन्त्रण महाशाखाको तथ्यांकले देखाएको छ ।
‘सिपाही संघमा, बन्दुक प्रदेशमा र गोली स्थानीय तहमा भएपछि एकअर्कामा दोषारोपणबाहेक के काम हुन्छ त ?’
डेंगुले प्रतिदिन महामारीको रूप लिँदै गए पनि नियन्त्रणको जिम्मा पाएको निकाय भने निरीह देखिएको छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार एकअर्कामा दोष थुपार्दै मुख हेराहेर गरेर बसेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा ४२ जिल्ला डेंगु प्रभावित बनिसकेका छन् । डेंगु नियन्त्रण काबुबाहिर जानुमा तीन तहका सरकारबीच तालमेल मिल्न नसक्नु कारण भएको सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञले बताउँदै आएका छन् । डेंगु रोकथामका लागि ३ वटै सरकारले जति नै बजेट, जनशक्ति र श्रम खर्चिए पनि बालुवामा पानीबराबर भएको छ ।
‘सरकारले उपचार गर्न सक्छ, तर नियन्त्रण वशमा छैन’
अन्तरमन्त्रालय समन्वय तथा सरोकारवालासितको छलफल कार्यक्रममा विभागीय मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव तथा अन्य जिम्मेवार अधिकारीहरूको एउटै निष्कर्ष रह्यो– अब सरकारले डेंगुको उपचार गर्न सक्छ, तर नियन्त्रण काबुमा रहेन । सरकारले सबैखाले नियन्त्रणका अस्त्रहरूको प्रयोग गरिसक्दा पनि रोग फैलिनेक्रम नरोकिएकाले अब नियन्त्रण जनताको हातमा पुगेको अधिकारीहरूको निष्कर्ष छ । ८५ वटा स्थानीय तहमा खोज र नष्ट गर अभियान चलाइसकेको तर रोग नियन्त्रणमा प्रभावकारी बन्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकारले मात्र डेंगु नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकाले सबै पक्ष मिलेर गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले मात्र सकेन, अब सबै मिलेर परास्त गर्नुपर्यो,’ मन्त्री यादवले भने । राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले डेंगु नियन्त्रणका लागि सबै स्थानीय तहमा करोडभन्दा बढी बजेट पठाएर सबैखाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि रोग नियन्त्रणमा आउन नसकेको बताए । स्थानीयमा जागरुकताबाहेक अरु उपायले नियन्त्रण सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो ।
स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीले सरकारले गरेर डेंगु नियन्त्रण नभएकाले अब जनताले गर्नुपर्ने बताइन् । डेंगु नियन्त्रण मन्त्रालयको काबुबाहिर गएको उनको आशय थियो । ‘विषादी छर्किएर भएन, लोकल लेभलमा गयौँ, सबैखाले सम्भावित कार्यक्रम चलायौँ,’ सचिव चौधरीले भनिन्, ‘अब पब्लिक जागरुक नभई नियन्त्रण सम्भव भएन ।’ उपचारसम्बन्धी प्रोटोकलको फलो नहुँदा पनि समस्या भएको उनको भनाइ थियो । दसैँमा काठमाडौंमा डेंगुको महामारी फैलिन सक्ने जोखिम रहेको अधिकारीहरूको भनाइ थियो । तसर्थ, सबैलाई लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने उपायबारे सचेत रहन अधिकारीहरूले अपिल गरेका छन् ।
सेना परिचालनदेखि लार्भा भेटिएमा घरधनीलाई दण्डित गर्ने विषयमा छलफल गर्दै अधिकारी
मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले डेंगु नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । सन् २००९ मा चितवनमा डेंगुको महामारी फैलिँदा सेना परिचालन गरेको स्मरण गराउँदै उनले अब पनि लामखुट्टेको वासस्थान नष्ट गर्न सेना परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । रोग नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन गर्न सकिने भनाइ मन्त्री यादवको पनि थियो ।
राज्यमन्त्री डा. यादवले जनता स्वयंको पहलविना रोग नियन्त्रणमा आउन नसक्ने बताए । डा. यादवले कसैको घरमा लामखुट्टेको वासस्थान तथा लार्भा पाइएमा घरधनीलाई दण्ड गर्ने कानुन ल्याउनुपर्ने बताए । समग्रमा डेंगु नियन्त्रण सरकारको काबुबाट टाढा गइसकेको र जनताको हातमा गएको अधिकारीहरूको आशय थियो ।
सिपाही संघमा, बन्दुक प्रदेशमा र गोली स्थानीय तहमा हुँदा समस्या
दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण डेंगुजस्ता कीटजन्य रोग नियन्त्रण गर्न नसकेको स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देशक डा. सुशील प्याकुरेल बताउँछन् । ‘हिजोका दिनमा केन्द्रस्तरबाट दिएको निर्देशनबाट स्थानीय तहमा भएका संस्थाहरू तुरुन्तै परिचालित हुन्थे र कामको प्रतिफल आउँथ्यो,’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘आज स्थानीय तहको एउटा कर्मचारीलाई चलाउन प्रदेश सरकारलाई गाह्रो छ । त्यस्तै, प्रदेशमा रहेका कर्मचारीलाई निर्देशन दिन केन्द्रलाई गाह्रो भएको अवस्था छ ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तालमेल हुन नसकेका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको महानिर्देशक डा. प्याकुरेलको भनाइ छ । ‘हाल सिपाही संघमा, बन्दुक प्रदेशमा र गोली स्थानीय तहमा रहेका छन्,’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘तीनै तहको तालमेल नमिल्दा रोगले यो रूप लिइरहेको छ ।’
चालू आर्थिक वर्षको साउनयता सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ र ३ मा डेंगुको संक्रमण फैलिएको छ । ४० दिनको अवधिमा यी दुई प्रदेशमा १ हजार १ सय २२ जनामा डेंगुको संक्रमण देखिएको छ । त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा ३ सय ३९, प्रदेश ५ मा ५६, प्रदेश २ मा १४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ जनामा संक्रमण भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोगनियन्त्रण महाशाखाको तथ्यांकले देखाएको छ ।
हेल्थपोस्टको सन्देश : अब डेंगुबाट आफैँ बच्न यी उपाय अपनाउनुहोस्–
– लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न झुलको प्रयोग गर्ने वा लामखुट्टेको धूप वा क्रिम प्रयोग गर्नुपर्छ ।